Izixhobo kunye nezifakelo zeFektri, abaXhasi - AbaThengi baseChina kunye neziQhoboshelo abavelisi
I-Cork kunye nePads
Njengenye yezona zinto zixhomekeke kukhuphiswano kwinkampani, i-cork yethu kunye neephedi ezinemikhonto zibonelela ngeyona nqanaba liphezulu lokuncitshiswa kwesandi kunye nokungcangcazela ukubekwa bucala. Kwaye bafumene udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika, eMzantsi Melika, kuMbindi Mpuma naseAsia. Ngaphandle koko, kulula ukufakwa kwentsimi.
Isinyithi kunye neePads zeRibbed
Njengenye yezona zinto zixhomekeke kukhuphiswano kwinkampani, iipads zethu zentsimbi kunye neeribhini zakhiwe ngeplani yentsimbi ebotshelelwe phakathi kwembambo. Kwaye bafumene udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika, eMzantsi Melika, kuMbindi Mpuma naseAsia. Ngaphandle koko, yenzelwe umthwalo omkhulu wokulayisha.
Njengenye yezona zinto zixhomekeke kukhuphiswano kwinkampani, iisilingi zethu ziyilelwe ukudibanisa ihanger okanye intonga yokuxhasa imiqadi, iisilingi, okanye iindonga. Kwaye bafumana udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika. Kwakhona, kukho unyango umphezulu ezahlukeneyo ukhetho lwakho: Pre-iqaqanjiswa, Zinc ngumfanekiswana, epoxy kunye Gqibezela Green kwalenza ukuhlangabezana neemfuno zakho anticorrosion amanqanaba ahlukeneyo.
Intambo eChongiweyo ye-U-bolt eneNuts
Njengomnye weendawo zokubeka izinto ezinokhuphiswano kwinkampani, intambo yethu eyenziwe nge-U-bolt yamandongomane yenzelwe ukuSebenzisa ngokuBetha ngokuBanzi. Kwaye yafumana udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika, eMzantsi Melika, kuMbindi Mpuma, eYurophu naseAsia. Kwakhona, nceda uqaphele ngobubele kukho iinati ezimbini kwicala ngalinye.
Icala Beam Connector
Njengomnye weendawo zokubeka izinto ezinokhuphiswano kwinkampani, izihlanganisi zethu zebheyi zecala ziyilelwe ukudibanisa intonga yendawo yokuhlala ecaleni kwemiqadi okanye kwiindonga. Kwaye bafumana udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika. Kwakhona, kukho unyango umphezulu ezahlukeneyo ukhetho lwakho: Pre-iqaqanjiswa, Zinc ngumfanekiswana, epoxy kunye Gqibezela Green kwalenza ukuhlangabezana neemfuno zakho anticorrosion amanqanaba ahlukeneyo.
Ul Top Beam uqinisa
Njengomnye weendawo zokubeka izinto ezinokhuphiswano kwinkampani, izikhonkwane zethu zebheyini ephezulu zivunyiwe yi-UL. Kwaye bafumene udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika, eMzantsi Melika, kuMbindi Mpuma, eYurophu naseAsia. Kwakhona, kukho unyango umphezulu ezahlukeneyo ukhetho lwakho: Pre-iqaqanjiswa, Zinc ngumfanekiswana, epoxy kunye Gqibezela Green kwalenza ukuhlangabezana neemfuno zakho anticorrosion amanqanaba ahlukeneyo.
Ukukhwela iRibbed Pad
Njengenye yezona zinto zixhomekeke kukhuphiswano kwinkampani, iiphedi zethu zokukhwela ezinemibhobho zenzelwe ukudibanisa ihanger okanye intonga yokuxhasa imiqadi, iisilingi, okanye iindonga. Kwaye bafumene udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika, eMzantsi Melika, kuMbindi Mpuma naseAsia.
Njengomnye weendawo zokubeka izinto ezinokhuphiswano kwinkampani, iiphedi zethu zewaffle ziyilelwe ngeekomityi zokutsala ezakhelwe-ngaphakathi. Kwaye bafumene udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika, eMzantsi Melika, kuMbindi Mpuma naseAsia. Ngaphandle koko, kulula ukufakwa kwentsimi.